पार्टि प्रवेश बिशेषः रेखा थापा र कमल थापाले केके बोले ?
मंसिर, काठमाडौं । नेपालीकी चर्चित नायिका रेखा थापाले सोमबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिमा प्रवेश गरीन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले टिका तथा माला लगाइदिएर पार्टिमा प्रवेश गराएसँगै उनी अब पुर्णरुपमा राजनितिमा सक्रिए हुने देखिएको छ । आँफु हिन्दु नारी भएकोले पनि आफुले राप्रपा पार्टि राजेको उनको भनाई छ । यसका साथै आज पार्टि प्रवेश कार्यक्रममा नायिका रेखा थापा र पार्टि अध्यक्ष कमल थापाले बोलेका कुरा जस्ताको तस्तै पढ्नुहोस् ।
रेखा थापा "आमुल परिवर्तन गर्छु भन्न मलाई लाज हुन्छ" म आज राजनितिमा आए भन्दैमा मैले भोली आमुल परिवर्तन गर्छु भन्न मलाई लाज हुन्छ । मेरो अगाडि निकै ठुला ठुला नेता ज्युहरु हुनुहुन्छ । भोलीबाट म उहाँहरुको मार्गदर्शनमा हिड्ने छु । भोली मैले के गर्छु भन्ने कुरा मेरो भोलीका कामहरुले देखाउँनेछन् । - हिजो सम्म म मठमन्दिर जाँदा खेरी पुजारीहरुले रेखा जी तपाईपनि मन्दिर आउनुभएको भनेर प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, मैले त्यो प्रश्न किन गरेको भन्ने बुझेकी थिइन् । अहिले आएर बुझ्दैछु बल्ल । म त हिन्दु हुँ, शालीनदीमा गएर जन्मोत्सव मनाउँछु, पशुपति मन्दिरमा गएर पुजा गर्छु । म आजको आधुनिक नारी भएपनि पृतिपुजा गर्छु, जतिसुकै देश बिदेश घुमेर धेरै बुझेकी भएपनि म हिन्दु नारी हुँ, त्यो मैले बुझेकी छु । -
म अत्यन्तै राष्ट्रबादी मान्छे हुँ, जब मुलुक अत्यन्तै संकटपुर्ण अवस्थामा रहेको मैले बुझेँ अनि लाग्यो अब मैले पनि केहि गर्नुपर्छ , अझ मैले मात्र हैन तपाई हामी सबैले गर्नुपर्छ । त्यसैले म राप्रपा पार्टिमा आएँ । यो देश रेखा थापा, कमल थापाको मात्र होइन, हामी सबैको हो । त्यसैले सबै मिलेर देश बनाउँनु पर्छ । म जति योगदान दिन सक्छु, जति काम गर्न सक्छु, अब यहि पार्टिमा रहेर काम गरेर देखाउँछु । म देशका निमित्त, नेपालीका निमित्त र हिन्दु धर्मका निमित्त लडिरहन्छु । आज म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्न चाहान्छु, अब काम गरेर देखाउँन चाहान्छु । मेरो यो पहिलो र अन्तिम पार्टि हुनेछ । म नेपाल र राप्रपाको झण्डा ओडेरै मर्न चाहान्छु ।
कमल थापा "रेखा थापाको प्रवेशले राप्रपा धनी भएको छ" रेखा थापा राप्रपा परिवारमा आउनुभएको छ । यो हामीसबैका निमित्त गौरवको बिषय हो । म रेखा थापा र सरस्वती थापा ज्युलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । - म तपाईहरुलाई पुरा बिस्वास दिलाउँन चाहान्छु कि राप्रपामा प्रवेश गरेका दिनबाट तपाईले कहिल्यै पनि पश्चाताप गर्नुपर्ने छैन । आज तपाईको प्रवेश ले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टि अन्यन्तै धनि भएको छ । पार्टिमा एउटा स्थापित अभिनेत्रीको प्रवेश भएको मात्र बुझेको छैन, एउटा समक्ष ब्यक्ति पार्टिमा प्रवेश गरेको महशुस गरेको छु । - रेखा थापा जी सँग लामो चिनजान थिएन, यो भन्दा अघि दुईपटक मात्र साक्षात्कार गर्ने मौका पाएको थिए । र त्यति बेलानै मलाई बिश्वास थियो उहाँ राप्रपामा आउनुहुनेछ । र आज म बिश्वस्त छु कि उहाँ चलचित्र क्षेत्रको मात्र सफल अभिनेत्री होइन राजनिति क्षेत्रको पनि सफल अभिनेत्री बन्नु हुनेछ । -
यो भन्दा अघि राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकिकरण हुने दिन नै नेपाली चर्चित गायिका कोमल वली ज्यू पार्टिमा प्रवेश गर्नुभयो । त्यो हाम्रो सुखद सुरुवात थियो । त्यसोत राप्रपा पार्टिमा स्थापित कलाकारहरु पहिल्यै देखी पनि हुनुहुन्छ । नेपाली सांगितिक क्षेत्रकी अग्रणि ब्यक्तित्व मिरा राणा यहिँ हुनुहुन्छ । उहाँ पार्टिमा प्रवेश भएदेखी नै देशका बिभिन्न भागहरुमा पुगेर पार्टिका बिचार र आदर्शलाई स्थापित गर्नका निमित्ति ठुलो योगदान पुर्याउनुभएको छ । त्यहिकारणले पनि आज उहाँ पार्टिको सहायक महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ । पार्टिमा प्रवेश गर्नु भएका स्थापित कलाकारहरु कोमल वली र रेखा थापा ज्यूहरुले पनि मलाई लाग्छ योग्यता र क्षमताको आधारमा पार्टिमा आफ्नो स्थान बनाउन सक्षम हुनुहुनेछ । तपाईहरुको योग्यता र क्षमताको आधारमा पार्टिले जिम्मेवारी दिनेछ भन्ने पनि म यहाँहरुलाई बिश्वास दिलाउन चाहान्छु ।
रेखा थापा र कमल थापाले केके बोले ? तलको भिडियोमा पनि हेर्नसक्नुहुनेछ ।